Update New - Page 418 of 620 -
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၇ မျိုး
February 27, 2019 Naing 0
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၇ မျိုး 1- Live in the present ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာ […]
တရုတ်တွေ အလုအယက်လိုက်ဝယ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် သယံဇာတ တမျိုး (သိုိ့) ကျောက်ဂျပိုး
တရုတ်တွေ အလုအယက်လိုက်ဝယ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် သယံဇာတ တမျိုး (သိုိ့) ကျောက်ဂျပိုး ကျောက်ဂျပိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလည်းလို့ သိချင်သူများအတွက် အနည်းငယ် ပြောပြပေးပါမယ်။ ကျောက်ဂျပိုးဆိုတာက အင်းဆက်တွေလို အကောင်းသေးမျိုးဖြစ်ပြီး အနံ့ဆူးရှတဲ့ အကောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ ကျောက်ဂျပိုးတွေဟာ အမျိုးအစား အများကြီးရှိပြီး အရောင်မျိးစုံ နှင့် အရွယ်အစားတွေလည်း […]
မိတ်ဆွေဘယ်နေ့မှာမွေးတာလဲ? မှန်မမှန် ထောက်ဖတ်သွားနော်..
မိတ်ဆွေဘယ်နေ့မှာမွေးတာလဲ? မှန်မမှန် ထောက်ဖတ်သွားနော်.. -တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​ တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမဲ့… အခြားလူ ​တွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထား သူ​တွေပါ… ဒါ​ကြောင့် သူတို့ဟာ အခြား လူ​တွေနဲ့ ကွဲပါး​နေတတ် ​ကြပါတယ်​… တနင်္ဂ​နွေ သားသမီး​တွေဟာ စာဖတ် […]
ကင်ဆာသုတေသနဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားသိပံ္ပပညာရှင်ဒေါက်တာရည်မွန်အေး ၂၀၁၇ခုနှစ်​ဆေးနှင့်​ဓါတုသိပ္ပံထူးချွန်ဆုရ မြန်မာအမျိုးသမီး​​ဒေါက်တာ​ရည်မွန်​အေး ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအရင်လို ဓါတ်ကင်စရာမလိုပဲ အခြားနည်းလမ်းနဲ့ ပျောက်ကင်း သက်သာစေနိုင်မယ့် ဖြစ်နိုင်ချေနည်းလမ်းတွေကို သူ့ရဲ့ သုတေသနပြုချက်ကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်း အမေရိကန်သိပ္ပံဘာသာရပ်မှာ ထိပ်တန်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ကင်ဆာဇီဝဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာရည်မွန်အေးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ အခုလို ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး […]
ရင်ခုန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီး ကျင်းပမည့်ရက်ကိုကြေညာပြီ..
February 26, 2019 Naing 0
ရင်ခုန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီး ကျင်းပမည့်ရက်ကိုကြေညာပြီ.. အားလုံးတမ်းတမ်းတတဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးဟာ များမကြာမီ မှာမိဘပြည်သူတွေရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီ ဟာ နတ်ကြီးတယ်လို့ပြောကြပေမယ့် ဒီနှစ်ကျင်းပချီးမြှင့်မယ့်ပွဲမှာတော့ တကယ့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသူတွေကိုသာရွေးချယ် ပေးအပ်မယ်လို့ ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်း ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာ..။ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို မတ်လမှာသာပြုလုပ်မယ် လို့ ကနဦးသိရှိရပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ […]
ထူးထူးခြားခြား လိင်အင်္ဂါကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အံ့ဖွယ်လူသားများ….
ထူးထူးခြားခြား လိင်အင်္ဂါကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အံ့ဖွယ်လူသားများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခြားသူတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံကြောင့် ကိုယ်လက် အင်္ဂါ ထူးခြားစွာ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ့ရှိပါတယ်။ဒါကို ဆေးပညာအရ ရှားပါးမျိုးဗီဇ ဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေလို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မျိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရှားပါးအဖြစ်အပျက်တွေ အနက်မှ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ […]
သင့်ကို အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးသော လေယာဉ်ကြီးများ…..
သင့်ကို အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးသော လေယာဉ်ကြီးများ… ​လေယာဉ်​​တွေက​တော့ သွားလာ​ရေးနဲ့ သယ်​ယူပို့​ဆောင်​​ရေးမှာ အချိန်​မကုန်​​စေပဲ အဆင်​​ပြေ​စေတဲ့ ယာဉ်​​တွေပါပဲ။ဒါ​ပေမဲ့ ပုံမှန်​ မဟုတ်​ပဲ ကြီးမားလွန်း​နေတဲ့ ​လေယာဉ်​​တွေက​တော့ မင်းကို အံ့သြ​စေ​မှာ အ​သေအချာပါပဲ။ (10)-Hughes H-4 Hercules ဒါကို​တော့ သူ့ရဲ့ နာမည်​​ပြောင်​ဖြစ်​တဲ့ […]
မြန်မာပြည်မှာ လုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် (Made in Myanmar)
မြန်မာပြည်မှာ လုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် (Made in Myanmar) သီလဝါကနေ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို taxi သမားက နိုင်ငံခြားသားကို ၇၀၀၀၀ /ကျပ်ဆိုပြီး ဂျင်းထည့်တယ်။ အွန်လိုင်း ရှော့ပင်းရောင်းတဲ့သူတွေက ၁၀၀၀ တန် ပစ္စည်းကို ၅၀၀၀ တင်ရောင်းတယ်။ ဒါ ပို့ခ မပါသေးဖူး။ […]
မန္တလေးမှာ လမ်းမီးတိုင် ခြောက်ထောင်ကျော်၊ မီးလုံး ခုနစ်ထောင်ကျော် စံချိန်တင် တပ်ဆင်မည်
မန္တလေးမှာ လမ်းမီးတိုင် ခြောက်ထောင်ကျော်၊ မီးလုံး ခုနစ်ထောင်ကျော် စံချိန်တင် တပ်ဆင်မည် မန္တလေးမြို့မှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း လမ်းမီးတိုင်ပေါင်း ၆ဝဝဝ ကျော်နဲ့ မီးလုံး ရဝဝဝ ကျော်စံချိန်တင်တပ်ဆင်ဖို့ရှိတယ် လို့ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက သိရပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တော်ကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သောမြို့တော်အဖြစ် အကောင် […]
သင်မသိသေးတဲ့ ဆားရဲ့အံ့မခန်း အသုံးဝင်ပုံ (၁၀) မျိုး
သင်မသိသေးတဲ့ ဆားရဲ့အံ့မခန်း အသုံးဝင်ပုံ (၁၀) မျိုး ဆားဟာ ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ရရုံသာ စွမ်းဆောင်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထူး အသုံးဝင်တဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1)- ချိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ် ဟင်းအိုး […]
« 1 … 417 418 419 … 620 »